म्याग्दीकी देवी मगरले कारसहित जितिन् ‘मिस नेशनल आइकन’ उपाधि | Screennepal
म्याग्दीकी देवी मगरले कारसहित जितिन् ‘मिस नेशनल आइकन’ उपाधि
२०७६, १६ बैशाख सोमबार ११:२९screennepalEvents, hot news0
‘मिस नेशनल आइकन–२०१९’को उपाधि देवी मगरले जितेकी छन् । म्याग्दीकी २२ वर्षीया मगरले शीर्ष उपाधिसहित ‘ड्याट्सन कार’ प्राप्त गरेकी छन् ।
प्रतियोगिताको निर्णायकमा हेरिटेज कार्पेटका अध्यक्ष डा. माधव मल्ल, सौन्दर्यविद् डा. नवल पजियार, ड्याट्सनका जनरल मेनेजर ज्ञानेन्द्र चन्द, उमेश गुरुङ, सञ्चारकर्मी बेञ्जु सरोज थिए ।
Previous Post‘अभिव्यक्ति’ शृंखलामा प्रस्तुत हुँदै जानु Next Postप्रसुन बडाल भइन् ‘राइजिङ स्टार’